कमरेड प्रचण्ड ! ओलीलाई सच्याउने कि पछ्याउने ? - Ratopati
दोस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतद्वारा संरक्षित नेताका रूपमा प्रचार गरिएको छ । खासगरी एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने काममा भारत सरकारको हात रहेको भनी प्रचार गरेर प्रचण्डलाई भारतले नै नेपालको प्रधानमन्त्री बनाएको हो भन्ने भ्रम छर्न एमाले पार्टीको सम्पूर्ण पंक्ति एक किसिमले सफल भएको छ । परन्तु एमाले पंक्तिको आरोपलाई व्यवहारबाटै झूठ सावित गर्नेतर्फ भन्दा अनावश्यक शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर खण्डन गर्ने काममा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले समय खर्च गरिरहेको पाईयो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गलत काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहेजस्तो र एमाले पार्टीबाट भैरहेको प्रचारबाजी पनि सही हो भनेजस्तै भइरहेको छ ।
खास गरी ५ नम्बर प्रदेशलाई तराई र पहाड छुट्याउने गरी संशोधन गर्ने प्रयासमा भइरहेको संविधान संशोधन प्रस्तावको बचाउ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी ओलीकै गन्तव्यमा हिडाउन खोजिएको बुझिन्छ । ५ नम्बर प्रदेशलाई संशोधन गर्न खोजिएको प्रशंगमा केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ठीक थिए वा बेठीक थिए भन्ने बारे भन्दा हिँजो ओलीले गरेको काम आज प्रचण्डबाट गराइनुलाई बहादुरी ठानिएको छ । सुशील र केपी ओलीले पहिले नै दस्तखत गरिसकेको भनेर माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बचाउमा तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । स्वंय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूले केपी ओलीकै प्रस्तावलाई पछ्याएको भनेर राष्ट्रघातको आरोप लगाउनेहरूलाई त्यस्तै किसिमको जवाफ दिईरहनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी ओलीबाट भएका राष्ट्रघाती कामहरूलाई पछ्याउने कि सच्याउने ? यो अहम प्रश्न दश वर्षसम्म आमूल परिवर्तनका लागि देशमा सशस्त्र युद्ध लडेर १६ हजार नेपाली जनताको रगत बगाएर निर्माण भएको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ भन्ने पंक्तिकारको आग्रह हो । केपी ओलीले जे जति राष्ट्रघाती कामहरू विगतमा गरेका छन्, ती सबैलाई पछ्याएर प्रचण्ड हिड्ने हो भने ओली र प्रचण्डबीचको भिन्नता के नै रहयो ? ओलीका गलत कामहरू विगतमा अनगिन्ति छन् । ती गलत कामहरूलाई प्रचण्डले सच्याउँदै अघि बढ्ने आशा र विश्वास नेपाली जनतामा भएको हो । ओलीका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै एक असल देशभक्त राजनेताका रूपमा आफूलाई उभ्याउने काम प्रचण्डबाट हुनेछ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । तर आम जनताले अपेक्षा गरे विपरित ओलीलाई पछ्याउँदै राष्ट्रघातमाथि थप राष्ट्रघात गर्दै अगाडि बढ्ने काम प्रचण्डबाट भइरहनु र माओवादी केन्द्रले प्रचण्डका यस्ता गलत कामहरूलाई अनुमोदन गर्दै जानु ठीक होइन भन्ने मेरो सुझाव हो ।
गलत कामहरू केपी ओलीबाट भएका हुन वा गिरीजाप्रसाद कोइरालाबाट गरिएका हुन्, त्यसलाई सही भन्न सकिदैन । प्रचण्डले गलत कामहरूलाई पछ्याएर हिड्छन् भने त्यसलाई पनि सही भनेर लेख्न सकिदैन । जनधारणा साप्ताहिकको गत मंसिर २३ गतेको अंकमा मैले ‘प्रचण्डले पाउने सलाम केपी ओलीलाई’ भन्ने शीर्षक राखेर आफ्नो आलेख प्रस्तुत गरेको थिएँ । उक्त शीर्षकको आलेखमा मैले प्रचण्डलाई केपी ओली भन्दा राष्ट्रवादी हुनुपर्नेमा किन कमजोर धरातल बनाउँदै छन् प्रचण्ड भनेर लेखेको छु । ओलीका विगतमा भएका राष्ट्रघाती कामहरूलाई मैले एक ÷एक गरेर औल्याएको छु र आलोचना गरेको पनि छु । मैले ओलीप्रति भक्तिभाव प्रकट गरेको भनेर केही सुभेच्छुकहरूले टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ । ओलीप्रति मैले भक्तिभाव प्रकट गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । ओलीकै कारणबाट महाकाली सन्धिजस्तो राष्ट्रघाती सन्धि मध्यरातमा पारित गरिएको थियो । त्यही सन्धिका कारणबाट नेकपा एमाले विभाजित भएर देशको बामपन्थी राजनीति नै कमजोर बन्न पुगेको हो । त्यसपछि पनि भारतलाई खुसी बनाउनकै लागि ओलीकै अगुवाईमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रयास भएको थियो । सांसद खरिद बिक्रीदेखि लिएर संसदलाई पजेरो काण्डका नामबाट बदनाम गराउने काम पनि ओलीजीकै अगुवाईमा भएका बिक्रितिजन्य कामहरू हुन् । त्यसैले ओलीजीलाई मैले राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भनेर लेख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
ओलीजीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेका केही आत्मनिर्भरताका पहलहरू निश्चय पनि सकारात्मक छन् । ती कामहरू ओलीले गरिसकेपछि उनी निश्चय पनि आफ्नो कामका निम्ति सम्मानित छन् । तमाम गलत कामहरू गरेका व्यक्तिबाट पनि केही सकारात्मक काम हुन्छन् भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन । ओलीको सन्दर्भमा पनि त्यही सकारात्मक कामका लागि पंक्तिकारले सम्मान गर्न खोजेको हो । सबैका नजरमा भारतसँग निकट रहेका व्यक्तिको परिचय बनाएका ओलीबाट त मुलुकको हितका लागि केही राम्रो काम हुन्छ भने स्वभाविक रूपमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको लागि हतियार उठाएका प्रचण्डबाट त झन हरेकले राम्रो कामको अपेक्षा गर्छ नै । तर आम जनताको अपेक्षा अनुसार प्रचण्डबाट राम्रो काम हुनुको सट्टा विगतमा नेपाली कांग्रेस तथा एमालेले गरेका गलत कामहरूमा ल्याप्चे लगाउने तथा उनीहरू भन्दा एक कदम अघि बढेर मुलुकको अहित हुने काममा अग्रसर हुनुले जनतामा प्रचण्डप्रतिको श्रद्धा तथा सहानुभूति घटेकै हो । एउटा आम नागरिकका हिसाबले यो विषयले पंक्तिकारलाई पनि झस्काउने काम गरेकाले सुझाव स्वरूप यो आलेख तयार पार्नु परेको हो । त्यसैले यसलाई ओलीप्रतिको सदभाव र प्रचण्डप्रतिको दुर्भावका रूपमा अथ्र्याउनु न्यायोचित छैन र हुँदैन पनि । राम्रो काम गरेपछि दुवै नेताप्रति नेपाली जनताको सम्मान रहने नै छ ।